Maamulka Gobolka Banaadir oo ugu baaqay bulshadiisa in ay canshuur bixiyaan si dib loogu celiyo adeeg wanaagsan. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Maamulka Gobolka Banaadir oo ugu baaqay bulshadiisa in ay canshuur bixiyaan si...
Maamulka Gobolka Banaadir oo ugu baaqay bulshadiisa in ay canshuur bixiyaan si dib loogu celiyo adeeg wanaagsan.
Shirkaan oo ay kasoo qeyb-galeen Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo Agaasimayaasha qaabilsan dakhliyada Dowladda Hoose ayaa waxaa baaq loogu diray shacabka ku dhaqan Gobolka Banaadir in ay noqdaan Canshuur bixiyeyaal.
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa xusay in canshuurta ay bixiyaan shacabka dib loogu soo celin doono bilicdii Caasimada isla markaana wax looga qabto adeegyada aas-aasiga ah ee Bulshada u baahan-yihiin sida Waxbarashada, Caafimaadka, Nadaafada iyo dhismaha Kaabayaasha muhiimka ah.
Previous articleKiisas cusub oo Covid-19 ah ayaa laga helay South Africa.
Next articleGolaha Ammaanka ee QM oo looga hadlay dedaallada dhaliyarada Soomaalyeed dhinaca Nabadda.